Directory Directory - Fivarotana B2B - Fampahalalana ho an'ny mpamatsy
eto amin'ny Alietc dia manolo-tena ny hamorona an'izao tontolo izao isika Tsena B2B izay mitambatra mpanamboatra, mpamatsy ary mpividy, manampy amin'ny fametrahana fifandraisana mahasoa sy maharitra ary maharitra.
Ny fanalahidin'ny fahombiazana ho mpanamboatra afaka mijanona amin'ny tranga maromaro, ny sasany izay tafiditra amin'ny vokatrao, ny hafa kosa dia miatrika ny fomba iatrehana ireo mpividy. Mba hahafahana manantona kokoa ny fahombiazanao amin'ny Alietc, namoronanay an'ity ilaina ity Boky fanamboarana mba hanampiana anao hisoroka ny ankamaroan'ny lesoka mahazatra natao rehefa manandrana mivarotra entana.
Ny fanalahidin'ny famoronana fifandraisana mahomby amin'ny mpividy dia ny famerenana amin'ny fampanantenanao
Izany no ilazantsika fa tsara kokoa ny mitombina amin'ny fandaharam-potoana ary tsy manao fampanantenana diso momba ny kalitao vokatra. Ny fifandraisana miasa tsara dia miorina amin'ny zavatra tokana ary izany no fahatokisana. Ny fametrahana ny fahatokisana dia tokony ho tanjonao voalohany rehefa mifampiraharaha amin'ny mpanjifa vaovao. Ny zava-dehibe koa dia ny fitokisana no fahatokiana. Raha manome fe-potoana omena, na taloha kokoa aza ianao, nahoana ny mpividy no handeha any an-kafa, na ho an'ny olona manolotra vokatra mitovy amin'ny vidiny ambany 3%?
Mifantoha amin'ny fanaraha-maso kalitao
Mety efa nangataka anao ho santionany amin'ny vokatra (anao) ilay mpividy anao fanamboarana. Ireo ohatra alefanao ireo dia natao ho fisaintsainana marina sy marina momba ny kalitao mahazatra entana. Ny vokatra rehetra alefanao an'io mpividy io dia tokony ho mitovy, na tsara kalitao ary tsy mifantina ny sasany tsara kokoa, ny sasany dia mitovy ary hatsaratsara kokoa. Tokony hampiasa fomba fanaraha-maso tsara kalitao alohan'ny fandefasana ny baiko rehetra ianao mpividy tsy hanana antony hitarainana rehefa mahazo ny baikony izy ireo. Raha averinao indray, raha mandefitra amin'ny kalitao, isaky ny mandeha, maninona no a mpividy mijery any an-kafa? Mora kokoa ny mitazona mpanjifa noho ny mahazo vaovao.
Mifampiresaka mazava sy matetika
Ny serasera dia singa manan-danja amin'ny fifandraisana misy amin'ny raharaham-barotra ary matetika dia hevitra tsara ny mametraka ny tenanao ao amin'ny kiraron'ny mpividy anao rehefa miresaka aminy. Matetika ny mpividy sy mpanamboatra dia mety ho hita kilometatra an'arivony kilaometatra, ary rehefa atao ny baiko na alàlan ny santionany angatahina, amin'ny andro any aorian'izay dia tsy misy maharatsy ny mpividy fa tsy mangina tanteraka. Na amin'ny alàlan'ny antso an-telefaona (ny fandraisana manokana manokana dia raisina an-tanana foana) na amin'ny alàlan'ny mailaka, ampahafantaro tsara ny fantatry ny mpividy anao ny zava-misy amin'ny baikon'izy ireo.
Raha vantany vao tonga ny vokatra, dia mbola te hifandray amin'ny mpividy ianao mba hahazoana antoka fa faly 100% amin'ny baikony. Izany dia mampahafantatra azy ireo fa tena miahiahy momba ny haavon'ny fahafaham-pony ianao ary hamela anao handamina olana na hanao fanitsiana amin'ny baiko ho avy. Araka ny voalaza teo aloha, tazomy ny mpanjifa noho ny mahazo iray.
Ny reputation dia manisa daholo
Eto amin'ny Alietc dia miasa izahay rafitra miasa ho an'ny mpanamboatra, mpamatsy ary mpividy. Manentana ny mpitsidika izahay hamela ny valiny marina momba ilay olona / orinasa nifandraisan'izy ireo. Zava-dehibe io tamberina io, na mpividy ianao na mpivarotra, arakaraka ny maha-tsara ny lazananao no anirian'ireo olona mirona kokoa hiasa aminao.
Isaky ny olona na raharaham-barotra ifaneraseranao dia tokony hiaro ny lazanao foana ianao ary mikendry azy ireo hamela anao hamerina 5 * famerenana isaky ny manao orinasa miaraka amin'izy ireo. Mora ny mahazo azy ireo EA $$$$$$$$$$$ Y hampiakarana ny vola miditra amin'ny alietc.com
Lisitry ny vokatrao ao amin'ny Alietc
Nomenay anao ny fitaovana rehetra ilainao mba hamoronana lisitr'ireo vokatra mahaliana. Na izany aza, ireo lazainao sy ireo sary nofidinao hampiasaina dia miankina aminao avokoa.
Manoro hevitra izahay mba hamaritana mazava sy marina ny vokatra tsirairay avy amidy, ka tadidio ny hampiditra izany fampahalalana mety mahaliana anao izany.
Aza mamitaka ny vokatra na ny datin'ny fandefasana. Tsy vitan'ny hoe hahomby amin'ny mpividy izany, fa hahita azy ireo hifidy any an-kafa.
Aza adino fa raha mahazo fitarainana matetika momba ny mpanamboatra isika dia tsy havela hanohy ny sehatry ny varotra Alietc.
Tsy misy na inona na inona mamono sary avo lenta. Ho hitanao eo ambanin'ny lisitra lisitra izay azonao ampidirina amina sary na vokatra maromaro tianao amidy. Miaraka amin'ireo sary nomerika ankehitriny dia tsy misy fialan-tsiny amin'ny sary manara-penitra.
Misafidy ny fomba hivarotra ny vokatrao amin'ny Alietc
Manana safidy ianao amin'ny fomba hampiroboroboana ny vokatrao. Raha miasa amin'ny tontolo mifaninana be ianao, dia mety tsy te hampahafantatra ny vidinao, na mety hoe manome fihenam-bidy mahaliana ianao amin'ny baiko be / averimberina. Raha aleonao ny tsiambaratelo amin'ny lafiny ara-bola amin'ny zavatra tsy azo itokisana, dia afangaro fotsiny "Mifandraisa aminay amin'ny vidiny tsara indrindra". Miasa koa amin'ny vokatra izay miova ny sandany arakaraka ny hery an-tsena sy ny vidin'ny akora.
Raha tsy izany, azonao atolotra ny vokatrao amin'ny alàlan'ny fangatahana tolotra fa tsy manome vidiny (na dia mety ho ilaina aza ny mpitari-dalana vidiny). Asao ny olona handefa ny vokatrao sy ny fomba ahafahanao manokatra fifampiraharahana, zavatra tsy dia misy dikany raha manolotra vidiny raikitra ianao.
Ny fivarotana amidy dia mety ho mandeha tsara raha fantatrao fa tena mifaninana ny vidiny, ary te handresy ny mpifaninana aminao ianao.
Fahazoana ny fangatahana avy amin'ny mpividy
Ny vokatra rehetra izay notanisainao dia namboarin'ny orinasanao dia ho hita ao amin'ny motera fikarohana anay. Vokatr'izany, raha misy mpividy iray dia mitady vokatra manokana ary mahita anao manamboatra azy ianao, dia afaka mandefa ny fangatahana aminao izy ireo.
Misafidy ny haavon'ny maha-mpikambana anao
Namorona ambaratonga telo ho an'ny mpikambana izahay, ny iray amin'ireo dia tokony hifanaraka aminao tsara. Ny safidinao ho mpikambana dia miankina amin'ny habetsaky ny raharaham-barotra sy ny isan'ny vokatra tianao amidy amin'ny sehatra Alietc. Takianay ho mpikambana ao amin'ny sehatra Alietc ianao mba hahazoana antoka fa orinasa bona fide ianao ary ny vokatra (atiny) atolotrao dia tena marina. Miasa betsaka amin'ny tombotsoanao tahaka ny amin'ny Alietc izany dia tsy voatery hifaninana amin'ireo orinasa tsy dia malaza loatra ianao.
Na manamboatra baiko izy io, na mamokatra tahiry amidy eny an-tsena misokatra, afaka manampy anao i Alietc. Ny fikarohana fohifohy momba ny tranokalanay dia hanaporofo aminao ny maha-be herim-po anay amin'ny fampifandraisana ireo mpividy sy mpamatsy amin'ny mpanamboatra, indrindra fa mpanamboatra vokatra manokana.
Ahoana no fomba hahatratrarana izany? Amin'ny alàlan'ny fikaroham-bidy amin'ny alàlan'ny paikady SEO mahomby (fikarohana search optimization) dia azontsika antoka fa fantatry ny mpividy ny vokatrao rehetra ny fisianao sy izay tokony atolotrao.
Ny zava-dehibe ihany koa dia ny fahafantarana fa manana fifehezana tanteraka ianao momba ny fomba sy hivarotanao ny vokatrao, ary inona no vidiny. Mety mihena ny tsenan'omby ary hanana ny fahaizana sy ny fitaovana hihetsika, eo no ho eo, ny fiovan'ny tsena dia hiantoka ny vokatra azonao, fotoana sy fotoana tsy ampoizina.
Voalohany, mila misoratra anarana amin'ny iray amin'nay ianao drafitra momba ny mpikambana
Rehefa nahavita ny mombamomba anao ianao, dia afaka manomboka manomboka mivarotra ireo vokatrao izay namboarinay araka izay azo atao. Ny hatsaràn'i Alietc dia maniry ny hanamora ny zava-drehetra sy mahomby isika, noho izany dia manana safidy roa ianao, na azonao atao ny manaparitaka safidy roa.
Tanisao ny vokatrao amidy. Rehefa misoratra ny vokatrao ianao dia tsy tafiditra ao ny vidiny. Ny antony tsy aseho ny vidiny dia satria mino isika fa ny fananana ny fifampidinihana mifototra amin'ny variabel maromaro dia mahomby kokoa ary mahavita valiny tsara kokoa ho an'ny mpanamboatra sy ny mpivarotra. Ny volume sy ny elanelam-potoana dia variabel roa izay mety hisy fiantraikany amin'ny vidin'ny unit, ka tsy misy dikany ny hamerana ny tenanao amin'ny vidiny tokana sy maharitra. Ny vokatra rehetra voatanisa dia misy ny fangatahana "Fifandraisana amin'ny fifandraisana" ho an'ireo mpividy. Tamin'ny voalohany, ho tonga eto amintsika ny fangatahana eto Alietc ary rehefa avy isika no nanombatombana ny maha-ara-dalàna ny mpividy, dia homena miaraka amin'ny antsipirihany manokana izy ireo ary avy eo ianao dia afaka mifampiresaka mivantana amin'ny mpividy.
Hamarino ny fangatahana mpividy. Tsy toy ny tsenam-barotra nomerika hafa, Alietc mandrisika ny mpividy hametraka ny fangatahana vokatra. Izy ireo dia hiresaka aminao hoe firy ny vokatra tadiaviny ary rehefa mila fanaterana izy ireo. Azonao atao ny mametraka 'bid'. Tsotra izany! Raha tsapanao fa nandao ny mombamomba ny zava-tsarotra ny mpividy, dia afaka mifandray aminao amin'ny mpividy ianao, mba hahafahanao handresy ireo antsipirihany tsara.
Alietc - Mihoatra lavitra ny tsena amin'ny Internet